Keilor Heights Secondary - Mmekọahụ | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Keilor Heights Secondary - Mmekọahụ
Obere obere nwa akwukwo sere foto na klas nke 9 na ulo akwukwo Keilor Heights na Victoria, Australia. Nke a bụ mmega ahụ maka ụmụ akwụkwọ iji kọwaa omume Mmekọahụ. Rịba ama na "ịkekọrịta ihe etinyere n'ime ike ma ọ bụ ikpu" omume. Ndị nkuzi na-eche na ha nwere ikike isoro ụmụ anyị tụlee ụdị omume a na klaasị. Dị ka nne na nna, anyị anaghị enye ha ikike ahụ.